हाम्रो पहलमा तीन बलात्कारी जेल चलान, यी हुन सीसी क्यामेरामा कैद भएका सुन चोरहरु (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
प्रकाशित मिति : Mar 02, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३४७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा विभिन्न विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ । यसका साथै विशेष ब्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
१–गोदामचौर बलात्कार प्रकरणः पीडितले पाइन् न्याय– तीन अभियुक्तलाई १० वर्ष जेल सजाए !
काठमाडौं । २०७४ मंसिर २ गतेको गोदामचौर बलात्कार काण्डमा पाटन जिल्ला अदालतबाट पहिला साधारण तारेखमा रिहा भएका तीन अभियुक्त पुनः जिल्ला अदालतले नै १० बर्ष कैद सजाए सुनाएको छ । पाटन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको एकल इजलाशले रघु शिलवाल, विशाल ध्वज कार्की, र पवन कुँवरलाई बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग र चोरी मुद्धामा गरी जनही १० बर्ष जेल सजाएको फैसला गरेको हो । २०७४ मंसिरको एक साँझ एउटा युवती कामबाट फर्किर्दै गर्दा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी थिइन् । उनलाई भोलिपल्ट मात्रै क्षत् विक्षत शरीर, बेहोस अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो ।
२– सीसी क्यामेरा भएकै ठाउँबाट चोरी हुदा पनि चोर समातिदैन !
रुपन्देही । सीसी क्यामेरा । कार्यालय, पसल तथा सार्वजनिक स्थानमा सुरक्षा निगरानीका लागि भन्दै सीसी क्यामेरा राखिन्छ । कुनै चोरी, डकैती, अपराघका घटना तथा दुर्घटनाभएमा सम्पूर्ण घटनाहरु कैद हुने र अपराधि पत्ता लगाउन सजिलो हुने भएकाले यसको प्रयोग दिनानु दिन बढ्दो छ । तर सीसी क्यामेरामा देखिएका व्यक्ति समेत प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेपछि रुपन्देहीका सुन पसलमा चोरी हुने क्रम बढेको छ । शुक्रबार बिहान ५ बजे भैरहवास्थित बैंकरोडमा रहेको बिके ज्वेलर्समा चोरी भयो । समुहमा आएका मध्य २ जना पसलको चाबी फोडेर पसल भित्र छिर्छन र एकै छिन्मा सबै खानतलासी गर्दै ७ लाख बराबरको सुनका गहना टिपेर भाग्छन् ।
३– पूर्व प्रहरी पौडेल आफैले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउँछन् !
काठमाडौं । काठमाडौ नयाँ बसपार्क स्थित एक साइबर पसलमा पूर्व प्रहरीले नै नक्कली सर्टिफिकेटको कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको छ । बसपार्क स्थित पुर्व प्रहरी स्याङझाका गोपाल पौडेलले सञ्चालन गरेको युनिक साइबरमा एसएलसी, प्लस–टु, नक्कली लाइसेन्स बनाउने गरेको सुचनाका आधारमा हाम्रो टिम साइबरमा पुगेको थियो ।